Guddiga diiwaangelinta oo maanta Tirinta kunka qof ka bilaabay Burco iyo Taageerayaasha WADANI oo Hafiyey | Berberanews.com
Home WARARKA Guddiga diiwaangelinta oo maanta Tirinta kunka qof ka bilaabay Burco iyo Taageerayaasha...
Guddiga diiwaangelinta oo maanta Tirinta kunka qof ka bilaabay Burco iyo Taageerayaasha WADANI oo Hafiyey
Burco-(Berberanews)- Guddiga diiwaangelinta Ururrada siyaasadda iyo ansixinta Xisbiyada Qaranka Somaliland, ayaa maanta tirinta madax-taabashada kunka qof ee urur kasta laga rabo ka bilaabay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer, waxaanay Ururradu halkaa ku soo bandhigeen cudud taageero oo fara badan, hase-yeeshee, Taageerayaasha Urur-siyaasadeedka WADANI ayaa Guddiga iyo Ururrada kale ba hafiyey fara badnaan awgeed.
Taageerayaasha urur-siyaasadeedka WADANI ayaa Buux-dhaafiyey Sayladda Xoolaha ee magaalada Burco oo ahayd goobta WADANI barkulanka u ahayd taaageerayaashiisa si ay Guddigu halkaa ugu tiriyaan tirada looga baahan yahay ururkaasi inuu ku yeesho gobolka Togdheer, hase-yeeshee, toban laab ka badan tirada kunka ayuu WADANI soo bandhigay, taasoo ay ka dawakheen Guddiga, Ururrada kale iyo dadweynaha reer Burco.
Masuuliyiinta Urur-siyaasadeedka WADANI oo uu hormuud ka yahay Guddoomiyaha ku-meel-gaadhka ah ee Ururkaas Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro), ka hor intii aanay Guddiga diiwaan-gelintu soo gaadhin madasha la isugu soo baxay ee ay taageerayaasha ururkaasi ku soo bandhigayeen cududdooda taageero ee ay ku leeyihiin gobalka Togdheer, waxaa dadweynaha meel sare kala hadlay masuuliyiin kala duwan oo ay kamid yihiin xubnaha wafdiga ururka Waddani.
Waxaana kamid ahaa Xildhibaan Xuseen Axmed Cige oo dadweynaha reer Burco ku amaanay taageerada baaxadda leh ee ay u muujiyeen masuuliyiinynta ururka Waddani reer Burco haddii aad tihiin waanu idin aragnaa sida aad noo soo dhaweyseen waanan idin aragnaa inaad na jeceshihiin waanand mahadsaantihiin sidaa waxaa yidhi Md Xuseen Cige.
Guddoomiyaha ururka Waddani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi [Cirro] oo isaguna halkaa ka hadlay waxa uu sheegay inay dadweynaha reer Burco soo bandhigeen taageeradii uu ka falayey iyo mid ka sii badan dadweynaha reer Burco walaallayaal waad mahadsantihiin waxaanand muujiseen taageeradii iyo tiradii aanu idinka filaynay iyo mid kasii badan Hatgreysa iyo Booramah iyo Berberaba waad iska dhiciseen ayuu yidhi Md Cirro.
Guddoomiye Cirro oo dhakada sare ka fuushanaan Gaadhi Landcruser ah oo xagga sare kaga xidhanyahay qalabka codka baahiya waxaa ku soo xoomay kumanaankii taageerayaasha u ahaa oo intay xamaasaddii iyo taageeradii Gudoomiyuhu madaxmartay is dul fuulay sida ayaxii xamaasaddii taageerayaashu waxay ku qasabtay inuu gacmaha iyo afkaba kala hadlo si ay dadku muuqaallkiisa uga bogtaan. Waxaana la arkayey isaga oo dhakada sare kaga taagan Gaadhiga oo haddana labada gacmoodba dadka u haadinaya kuna dhawaaqayey waad mahadsantihiin waad mahadsantihiin guuleysta guuleysta iyo erayo kale oo shucuurtiisa aad ku kiciyey.
Guddoomiyaha guddiga diiwaan-gelinta iyo xubnihii kale ee guddigaasi oo guurdambe soo gaadhay barxaddaweyn ee Sayladda xoolaha ee magaalada Burco oo taageerayaasha ururka Waddani mar-tilmaadeed u ahayd isu soo baxooda ayaa garan waayey meell ay kaga billaabaan iyo dhinac ay tiro koobkooda ka billaabaan toona. Guddoomiye Cabdirisaaq Ciyaalle markii uu gaadhiga ka soo dagay waxa uu durbadiiba ku haftay darafka hore ee dhinaca uu ka soo galay Sayladda maadaama ay Taageerayaasha ururkaasi ka sarreeyeen wax la tiro koobi karo, sidaa darteed xubnaha Guddiga diiwaangelinta waxa xidhay oo meell ay ka maraan ka waayeen kumannaankii taageerayaasha ahaa ee jidbadu madaxmartay.
Dabandeedna inta uu kalyaha qabsaday oo uu sidaa u dhex istaagay jamaahiirtii taageerayaasha reer Burco ee ururka Wadani, waxaanu yidhi Md. Ciyaalle; “Dadkani saaka wax la tirinkaro way ka badanyihiin.” Ka dibna waxa uu dib ugu laabtay gaadhigii uu watay waxaanay isaga iyo xubnihii uu hogaaminayey dhabaha dib u cabeen iyaga oo si weyn ugu qancay tirada dadweynihii aan caadiga ahayn ee saaka isgu soo baxay Sayladda Xoolaha ee magaalada Burco halkaasi oo ay
Taageerayaasha ururka waddani cududdii ay soo bandhigeen loo arkay inay tahay mid uu ururka Waddani ku hantay darajada 1aad ee kaalinta ugu saraysay saadaasha natiijada laga filayo inay soo bandhigidoonaan Guddiga diiwaan-gelintu markay hawshani dhamaato wiigga soo socda ka dib.
Si kastaba ha ahaatee, Urur-siyaasadeedka WADANI ayaa weli hormuud u ah Gobollada diiwaangelinta kunka qof Guddiga diiwaangelintu ka samaysay ee Awdal, Maroodi-jeex, Saaxil iyo Togdheer, iyaga oo Guddiga diiwaangelintu u sii gudbi doona Gobollada Sanaag iyo Sool.
Previous articleMadaxweyne Silaanyo oo qalinka ku duugay dhaqangalka xeerarka la-dagaalanka Budhcad-badeedka iyo kala wareejinta maxaabiista
Next article“Wasaaradaha iyo Hay’adaha dalka oo dhami qorshe ay ku kala joogaan shaqadooda iyo mid ay ku wada shaqeeyaan malaha….” Wasiirkii hore ee Hawlaha guud